ET: Nhaka 2.78: Zvimwe zvirimo zveWolfenstein: Enemy Territory | Linux Vakapindwa muropa
ET: Nhaka 2.78: Zvimwe zvirimo zveWolfenstein: Enemy Territory
Isaac | 06/10/2021 17:30 | Linux Mitambo, chiutsi
Wolfenstein: Nharaunda yeMuvengi ikozvino inokwira kumusoro nekusunungurwa kutsva kubva kuET: Nhaka. Iyo yekupedzisira mutambo wevhidhiyo wakakurumbira unoenderana nekodhi kodhi yeiyo yekutanga, uye dingindira rayo rakavakirwa pakupfura kwevazhinji. Zvakare, inowanikwa yeLinux uye iwe unogona dhawunirodha mahara kubva pawebhusaiti ino.
El chirongwa ET: Nhaka inoramba ichikura pamapuratifomu emazuva ano, ichirebesa hupenyu hweiyo yakasarudzika. Iye zvino ET: Nhaka 2.78 inowanikwa, nzira yekutamba Wolfenstein izvozvi uye nekuvandudza kwakawanda pamusoro peiyo yekutanga, uku uchichengeta mutambo wegemenzi wakasimba. Iyi vhezheni nyowani haingounze chete kugadziridza pane apfuura, asi zvakare inogumbura bug fixes.
Kudivi remutambi kune dzosera mhedzisiro yeropa pachiratidziri, chiratidzo chekukuvara chinoonekwawo zvakajeka pamupendero wechidzitiro, kutora nzvimbo shoma. Kune zvimwe zvinowedzeredzwa zvinoonekwa futi, senge munda wekutarisa renji kugadziridzwa kusvika 75-160. Uye vatambi vakakuvara havafanire kunamatira nekuvandudzika kutsva kwekugadzikana. Kuona kwekukonana kwakagadziridzwa uye zvimwe zvakawanda.
Padivi reinjini yeET: Nhaka, ruzha system yakaverengerwa zvakare OpenAIDzimwe furemu rate zvirevo zvakabviswa kuitira kuti ikwanise kukwira kusvika ku250 FPS, zvichikonzera kutsetseka uye kunyatsoita mutambo wemutambo. Gadzirira mavara asiri eASCII, gadzirira kurova kwemhepo uye kuputika, nezvimwe.
Kana iwe uchifarira kuyedza iyi yevhidhiyo mutambo mahara pane yako aunofarira GNU / Linux distro, unogona kuisa chinongedzo chandasiya pakutanga, pawebhusaiti yepamutemo, kwaunogona kurodha pasi pasuru UNIX uye 32-bit uye 64-bit masisitimu. Ndichiri kuvimba ne64-bit kuvaka kweMOD kuenderana. Iwe zvakare unayo ye macOS, Windows, Android uye yeRaspberry Pi ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » chiutsi » ET: Nhaka 2.78: Zvimwe zvirimo zveWolfenstein: Enemy Territory
ndatenda nekufunga zvinyorwa pamitambo yemavhidhiyo ye linux